RV 5 Taona: Fijoroana Vavolombelona Amin’ny Fifohazan’Ireo Vehivavy Iemenita · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2018 18:29 GMT
Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia navoaka tamin'ny Jona 2012
Anisany iray nahazo tombony tamin'ny tetikasa Rising Voces ny “Fahavitantenan'ireo Vehivavy iemenita Mpikatroka amin'ireo Tekinika Vaovaon'ny Media”, notarihan'i Ghaida'a Al Absi. Raha vao nanomboka ny tetikasa tamin'ny Aprily 2009, lahatsoratra iray no niresaka mikasika ny tsy firaharahiana ny fanaovana blaogy ao Yemen, indrindra fa eny anivon'ireo vehivavy.
Niasa mafy ireo mpandrindra ny tetikasa mba hanovàna ny zava-misy amin'ny fanomezana andiana sehatrasa iray tany aminà tanàna maro ao Yemen mandritra ny roa taona ho avy. Maro ireo fanamby. Nisy ireo fahatapahana herinaratra matetika, marobe ireo mpandray anjara no mandala loatra ny nentin-drazana, tsy navelan'izy ireo alaina sary izy ireo na dia ao anaty voaly aza.
Sary an'ny EWAMT
Saingy rehefa nandeha ny fotoana, toy ny nahagaga izany. Araka ny nosoratan‘i Ghaida'a manao hoe:
Tena basivava sy feno hery ireo mpikatroka ireo. Toy ny mahagaga, isaky ny manazatra mpikatroka vaovao ianao, mahazo hery avy amin'izy ireo.
Nieritreritra izy fa sahala amin'ny jiro jabora anatin'ny maro ny tetikasa EWAMT, izay manazava ny haizina ao Yemen. Ary vetivety ireo blaogin'ny mpampiofana sy ireo mpandray anjara dia tafapetraka. Afaka nahafantatra zavatra maro momba ireo vehivavy ao Yemen izahay. Ohatra:
Vokatry ny tsindry ara-tsosialy atao amin'ireo vehivavy, nanandrana nanaporofo izy ireo tamin'ny alalan'ny fahazoana fanabeazana ambony iray ary fahazoana fahaizana vaovao. Ohatra, ny taham-pahafahan'ireo ankizivavy ao amin'ny fanabeazana faharoa dia ambony kokoa noho ny an'ireo ankizilahy.
Tamin'ny Febroary 2010, vita niaraka tamin'ny fiofanan'ireo vehivavy blaogera 112 sy fandefasana blaogy 24 mavitrika ny dingana voalohany tamin'ny tetikasa. Nanomboka tao an-tanànan'i Taiz ny dingana faharoa niaraka tamina sehatrasa iray misy mpandray anjara 15. Ny Oktobra 2012 nanjary lasa mpampiofana i Sara AlMaktri, mpandray anjara teo aloha.
Nanomboka tamin'ny Febroary 2011 ny revolisiona tao Yemen. Ary efa hitanay sahady tany anaty fitroarana tany ny sasany tamin'ireo vehivavy nofanin'ny blaogy EWAMT. Nanakatona ny Anjerimanontolon'i Sana'a ny revolisiona ary nahemotra ireo sehatrasa. Saingy mbola nitohy nanao blaogy hatrany ireo vehivavy. Olga Ghazaryan, talem-paritry ny Oxfam GB mikasika ny Afovoany Atsinanana, manoratra ao amin'ny Oxfamblog mikasika an'io toetra henjana ananan'ireo vehivavy ao Yemen io.
Fihantsiana matanjaka an'ireo fijery nentin-drazana eo ny andraikitr'ireo vehivavy sy ny fomba izay tokony na tsy tokony asehony imasom-bahoaka ny fanohanana mandeha ho azy nataon'ireo vehivavy ho an'ilay revolisiona. Taloha, nanao zavatra tany ankatakonana sy tsy re izy ireo – nivoaka ho eny amin'ny Kianjan'ny Fanovàna izy ireo mba hanohitra miaraka an'ireo lehilahy, tamin'ny fijanonana ny alina, nifanerasera tamin'ireo olona ivelan'ny fianakaviany sy ny foko misy azy ireo ary ny fahasahiana miteny ny heviny imasom-bahoaka.
Manampy i Ms. Ghazaryan hoe:
Ao amin'ny firenena izay voafehifehy aminà fitsipika sy teritery isankarazany ny dingana tsirairay ataon'ny vehivavy, namorona fotoana iray “indray tao anaty andian-taranaka iray” ilay revolisiona mba hanentsenana ny elanelana misy eo amin'ireo lehilahy sy ireo vehivavy – anisany iray amin'ireo antony mahatonga an'i Yemen ho andalam-pandrosoana hatrany.
Ary dia feno hazavana ny haizina. Hoy ny fanamarihan'i Ghaida'a
Tsy ireo olana ara-teknika amin'ny fanaovana blaogy ihany no entin'ny EWAMT, fa mikasika ny fitrandrahana, ny adihevitra sy ny fanentanana an'ireo olana izay tsy resahana matetika eny anatin'ny tontolom-bahoaka ihany koa, noho ny maha-fatra-pifikitra amin'ny nentin-drazana ny fiarahamonina iemenita, ary matetika noho ny tahotra ny sampam-pitsikilovana iemenita izay mety hisambotra ny olona rehetra izay maneho ny tsy fahafaliany manoloana ny fitondrana ao Yemen.
Mitoetra hatrany ny fanambin'ireo vehivavy satria azo tsapain-tanana sy mahery ireo fandrahonana valifaty amin'ny alalan'ireo singa tena nentin-drazana hanoherana ny ezak'ireo vehivavy. Saingy manantena izahay fa mbola maro ny olona sy ireo fikambanana toa ny EWAMT no hitohy handrehitra hatrany ireo jiro, satria tsy ho azonareo tazonina ela ao anaty haizina ny afo miredareda.